Ipholile kwaye inesitayile kwiPetoskey!
Isiseko sekhaya esifanelekileyo sosapho lwakho njengoko usimka kuyo yonke ePetoskey! Lihonjiswe kakuhle, licocekile, kwaye likhululekile ikhaya kumgama wokuhamba ukuya edolophini ePetoskey. Ukuqhuba ngokulula ukuya ePetoskey state park beach, Walloon Lake, igalufa ekumgangatho wehlabathi kunye nayo yonke into engcono ehlotyeni eMntla Michigan. Iyadi ebiyelwe ngokupheleleyo ngasemva yabantwana bakho!
Umgangatho wokuqala unegumbi lokuhlala elikhulu elineebhedi ezimbini kunye nezihlalo ezongezelelweyo kunye ne-smart TV, indawo yokungena ephangaleleyo enengubo yedyasi kunye nebhafu enesiqingatha, kunye nekhitshi eliqaqambileyo elinendawo yebha, indawo yokutyela, kunye ne-smart TV eyongezelelweyo.
Ukungena usuka ngasemva kwendlu uya kufumana igumbi elikhulu lodaka elinempahla yokuhlamba kunye nendawo eninzi yokugcina bonke ubusika bakho kunye nezixhobo zokutyibiliza.
Umgangatho wesibini unamagumbi okulala amathathu kunye nebhafu enye epheleleyo. Igumbi lokulala eliphambili libonisa umatrasi omtsha we-king memory foam. Igumbi lokulala leendwendwe linomatrasi wokumkanikazi ongumqamelo onedesika kunye nesinxibo. Igumbi lokulala lesithathu linebhedi yokumkanikazi kunye nesinxibo osisebenzisayo.
Ukuzola, ubumelwane obuphakathi edolophini.
Ndifumaneka nanini na ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ndijonge phambili ukudibana nawe xa ungena, kuxhomekeke kwixesha lokufika.